ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးမှသည် ဒီမိုကရေစီရေးသို့
Wednesday, 29 October 2014 10:21	Print
‘Sequence’ အရေးကြီး လွတ်လပ်ရေး ရပြီးနောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးသမိုင်းကို အကျစ်လျစ်ဆုံး အနှစ်ချုပ် ဖော်ပြရလျှင် စာလုံးသုံးလုံးတည်းနှင့် လုံလောက်မည် ထင်ပါသည်။ ‘ပြည်တွင်းစစ်’ ဖြစ်သည်။ အားလုံးသိကြသည့်အတိုင်း လွတ်လပ်ရေးရပြီး သုံးလမှ မပြည့်တတ်သေးမီမှာပင် ပြည်တွင်းစစ်နှင့် ကြုံခဲ့ရရာ တိုင်းပြည်မှာ ယနေ့ထက်တိုင် ပြည်တွင်းစစ်နွံထဲမှ ရုန်းမထွက်နိုင် ဖြစ်နေရသည်။ ပြောရလျှင် ဇာစ်မြစ် နှစ်ခုကြောင့် ပေါ်ထွက်လာသော ပြည်တွင်းစစ်ကပင် ယနေ့ ဒီမိုကရေစီရေး၏ အဓိက အကျဆုံး၊ အနက်ရှိုင်း အသိမ်မွေ့ဆုံး ပြဿနာ၊ ‘အရပ်ဘက် စစ်ဘက် ဆက်ဆံရေး’ ကို မွေးထုတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ ဇာစ်မြစ်နှစ်ရပ်မှာ ‘အိုင်ဒီယော်လော်ဂျီဇာစ်မြစ်’ နှင့် ‘ဖက်ဒရယ် ဇာစ်မြစ်’ ဟု ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးတွင်မူ အိုင်ဒီယော်လော်ဂျီ တိုက်ပွဲမှာ ဘာလင် တံတိုင်းကြီးနှင့်အတူ ပွဲသိမ်း သွားခဲ့သော်လည်း မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင်မူ မပြီးနိုင် မစီးနိုင် စစ်အေး အငွေ့အသက်များ ရှိနေဆဲ ဖြစ်သည်။ သို့တစေ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခအသွင်ကား မရှိတော့၍ ပထမဇာစ်မြစ် (အိုင်ဒီယော်လော်ဂျီ ဇာစ်မြစ်) မှာ အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍတွင် မရှိတော့ပါ။ သို့နှင့်တိုင် ဒုတိယဇာစ်မြစ် (ဖက်ဒရယ်ဇာစ်မြစ်) ကား အခိုင်အမာ ရှိနေဆဲ ဖြစ်သည်။ ကျန်ဇာစ်မြစ်ကို မရှင်းနိုင်သရွေ့ ပြည်တွင်းစစ် သက်ဆိုး ရှည်နေဦးမည်သာ ဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းစစ် သက်ဆိုးရှည်နေသရွေ့ အရပ်ဘက် စစ်ဘက် ပြဿနာ ဖြေရှင်းရေးမှာလည်း ခက်ခဲနေဦးမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ဇာစ်မြစ်ကို ဖယ်သတ်နိုင်မှ အကျိုးဆက်ကို ဖယ်ရှားနိုင်ပါလိမ့်မည်။
နိုင်ငံရေး ပါတီကြီးတစ်ခုတွင် တာဝန်ယူထားသော မိတ်ဆွေတစ်ဦးက စာရေးသူကို ယခုလို မေးခွန်းထုတ်ဖူးသည်။ “နိုင်ငံရေးက စစ်တပ် ဖယ်ရှားရေးကို အဆောတလျင် မလုပ်ဖို့ ခင်ဗျားက အမြဲပြောတယ်။ အခုတစ်ပြည်လုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးကိုတော့ ဘာ့ကြောင့် အလောတကြီး လုပ်စေချင်တာလဲ...။” လက်တွေ့နိုင်ငံရေးတွင် ထဲထဲဝင်ဝင် ပါဝင် လှုပ်ရှားနေသော မိတ်ဆွေ ဖြစ်သည်မို့ စာရေးသူအနေနှင့် အသေးစိတ် ရှင်းမနေတော့ပါ။ သူ့မေးခွန်းကို အခုလိုပဲ ပြန်ဖြေခဲ့ပါသည်။ “နိုင်ငံရေးမှာ Sequence က အရေးကြီးတယ်ဗျ...”။
အတွေ့အကြုံနှင့် သင်ခန်းစာ (၁)
အမှန်စင်စစ် တစ်ဖက်တွင် ပြည်တွင်းစစ် ဆက်ဖြစ်နေသော်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေး ကြိုးပမ်းမှုများကား ပြည်တွင်းစစ် ကနဦးပိုင်း ကတည်းက ရှိသလောက် ရှိနေခဲ့သည်မှာ ယနေ့ထက်တိုင်ပင် ဖြစ်သည်။ သို့တိုင် ယခုအထိတော့ အောင်မြင်မှု မရသေး။ ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီခေတ်တွင် ကြုံခဲ့ရသည်မှာ အစိုးရက လက်နက်ကို အရင်စွန့်စေချင်သည်။ လက်နက်စွန့်ပြီးမှ ပါတီတရားဝင် ရပ်တည်ခွင့်ပေးမည်။ လက်နက်ကိုင် အင်အားစုများဘက်မှ နိုင်ငံရေးအရ အရင်ဆွေးနွေးလိုသည်။ ပြီးမှ လက်နက် စွန့်တန်စွန့်မည်။ သို့နှင့် လက်နက်စွန့်ရေးလား၊ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲလား အငြင်းပွားကြရင်းမှ ပြည်တွင်းစစ်တော့ မရပ်ဘဲ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံရေးစနစ်သာ တန့်ရပ်သွားခဲ့ရသည်။
တော်လှန်ရေးကောင်စီ ခေတ်ဦးကလည်း တောတွင်း လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း ရှစ်ဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ‘ကရင်တော်လှန်ရေး ကောင်စီ’ တစ်ခုနှင့်သာ သဘောတူညီမှုရပြီး ကျန်ခုနစ်ဖွဲ့နှင့် ဆွေးနွေးပွဲ ပျက်သွားသည်။ ဗကပလို၊ အလံနီလို အိုဒီအိုဘိုဂျီ အခြေခံအဖွဲ့များနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး မရခဲ့သည်မှာ ခေတ်ပြိုင် သမိုင်းပညာရှင် ‘နီးလ်ဖာဂူဆန်’ ပြောသလို ‘တိုင်းပြည်ကို ဘယ်လို အုပ်ချုပ်မည် ဆိုသည်ထက် ဘယ်သူ အုပ်ချုပ်မည်’ ဆိုသော ပြဿနာတွင် ညှိမရခြင်း ဖြစ်သည်။ လူမျိုးစု လက်နက်ကိုင်များနှင့် ဆွေးနွေးပွဲ ပျက်ရသည်မှာကား ဆိုခဲ့ပြီးသော ဖက်ဒရယ်ဇာစ်မြစ်ကို မရှင်းနိုင်သောကြောင့်လို့ ဆိုရပါလိမ့်မည်။ ယခု အခါတွင်ကား လူမျိုးစု လက်နက်ကိုင် အားလုံးကပင် ထိုစဉ်က သူတို့ တောင်းဆိုခဲ့ကြသော ‘ခွဲထွက်လိုက ခွဲထွက်ပိုင်ခွင့်’ ဆိုသည်ကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ကြပြီ ဖြစ်ပါသည်။ သို့တစေ ‘ဘယ်လိုဖက်ဒရယ်လဲ’ ဆိုသည်ကိုမူ ဆက်လက်ညှိနှိုင်းဖို့ လိုပါလိမ့်မည်။
ယခင် တပ်မတော်အစိုးရ လက်ထက်ကလည်း လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း အားလုံးလောက်နှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြရာ ထိုစဉ်က KNU မှလွဲ၍ ကျန်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်ဆဲရေး သဘောတူညီမှု ရခဲ့သည်။ သို့သော် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲများအထိ မရောက်ခဲ့၍ ရေရှည်ခံသော အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးကား မဖြစ်ခဲ့ပါချေ။ လက်ရှိ အစိုးရလက်ထက် ဆွေးနွေးပွဲများသည်ကား နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲများအထိ ဦးတည်ချက် ရှိနေ၍ ပိုအလားအလာ ကောင်းလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။
အတွေ့အကြုံနှင့် သင်ခန်းစာ (၂)
ဆိုခဲ့ပြီးသော ငြိမ်းချမ်းရေး ကြိုးပမ်းမှုများ ဘာ့ကြောင့် အောင်မြင်မှု မရခဲ့ပါသနည်း။ သမိုင်းကို Balance Game နှင့်မဟုတ်ဘဲ သင်ခန်းစာ ထုတ်ယူနိုင်ရေး အမြင်ဖြင့် ပြန်လည် ဆန်းစစ် ကြည့်သင့်သည်ဟု ထင်သည်။ ဤနေရာတွင် စာရေးသူ ဉာဏ်မီသမျှ ဆင်ခြင်မိသည်များကို အနှစ်ချုပ် တင်ပြလိုသည်။ အင်အားစု အသီးသီးမှ ငြိမ်းချမ်းရေး ကြိုးပမ်းနေကြသူများ စဉ်းစားပေးစေချင်ပါသည်။
၁။ Group Psychology မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင် ‘အုပ်စုအစွဲ’ (Group Psychology) ကြီး လွန်းနေသလား စဉ်းစားမိသည်။ “ရန်သူ၊ မိတ်ဆွေ သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက် ရပ်ခံမှုတွေ အခိုင်အမာ တွေ့နေရဆဲ ဖြစ်သည်။ (ဤသည်မှာ ပထမဖော်ပြချက်) မိမိရပ်တည်ရာ အဖွဲ့အစည်း၊ မိမိယုံကြည်ရာ အိုင်ဒီယော်လော်ဂျီ တစ်ခုကို မှားသည်ဖြစ်စေ၊ မှန်သည်ဖြစ်စေ ရာသက်ပန် သစ္စာခံသွားဖို့ လိုသည်။ ယုံကြည်ချက်တစ်ခုကို ဘယ်လောက်ပဲ မှားမှား၊ သင်္ချိုင်းကုန်းထိ သယ်သွားပါမှ သူရဲကောင်း...။ (ဤသည်မှာ ဒုတိယဖော်ပြချက်)။ တတိယ ဖော်ပြချက်မှာ ယခုကိစ္စနှင့် ပိုဆိုင်သည်။ တစ်ဦးချင်း၊ တစ်ဖွဲ့ချင်းအရ တကယ့်အရှိကို အမှန်အတိုင်းသိပြီး အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့် လက်ခံနိုင်သော်လည်း အများသဘော၊ အုပ်စုသဘော ဆောင်လာလျှင် တစ်မျိုးတစ်မည် ဖြစ်တတ်သည်။
၂။ All Inclusive ‘အားလုံးပါဝင်နိုင်ရေး’ (All Inclusive) ဆိုသည်မှာ ယခုနောက်ပိုင်း အလွန်ရေပန်းစားလှသော ဝေါဟာရ ဖြစ်နေသည်။ ဒီမိုကရေစီစံနှုန်း တစ်ခုဖြစ်နေ၍ ငြင်းဖို့ခက်သည်။ သို့တိုင်အောင် တကယ့်လက်တွေ့တွင်မူ ‘စံနှုန်း’ တွေနှင့် အခါခပ်သိမ်း အလုပ်ဖြစ်နိုင်သည် မဟုတ်။ All Inclusive ဆိုသည်နှင့် ‘ပါဝင်ပတ်သက်သူတွေ’ (Stakeholders) များလာရာ အကျိုးစီးပွား တွေထွေပြားလာသည်။ လက်တွေ့ ဖြေရှင်းစရာ ပြဿနာတွေ ပိုများလာသည်။ ဆွေးနွေးပွဲများ လက်တွေ့ကျကျ အဖြေရဖို့ဆိုလျှင် ယခုနောက်ပိုင်း ‘ပညာလောကတွင် ပိုအလေးထားလာကြသော ‘Minilateralisim’ ဆိုသည်ကို စဉ်းစားဖို့ လိုမည်ထင်ပါသည်။ ဤအယူအဆက ‘ဆွေးနွေးပွဲများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူနည်းလေ အဖြေရဖို့ ပိုလွယ်လေ’ ဟုဆိုသည်။ သို့တစေ ‘ပါဝင်ပတ်သက်သူတိုင်းတွင် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိဖို့ လိုလိမ့်မည်’ ဟူ၍လည်း ထပ်ဖြည့်ထားပါသည်။
၃။ Third Party ပဋိပက္ခ ဖြေရှင်းရေးတွင် ‘တတိယပါတီ’ ၏ (Third Party) ၏ အခန်းဆိုသည်မှာလည်း အလားတူပင် အထူးရေပန်းစားသော အယူအဆ ဖြစ်သည်။ သို့နှင့်တိုင် မြန်မာနိုင်ငံလို ‘အဖြူ၊ အမည်း သဲကြီးမဲကြီး ဖြစ်နေသော လူ့အဖွဲ့အစည်း’ (Highly Polarized Society) မျိုးတွင် လက်တွေ့ အလုပ်ဖြစ်မဖြစ် စဉ်းစားဖို့ လိုပါလိမ့်မည်။ တကယ်တမ်း တတိယပါတီ ဖြစ်ဖို့ဆိုလျှင် နှစ်ဖက်လုံး၏ ယုံကြည်မှုကို ရဖို့လိုသည်။ မြန်မာပြည်တွင်ကား အစိုးရက ယုံလျှင် အတိုက်အခံ (လက်နက်ကိုင် အင်အားစုများ အပါအဝင်) က မယုံ။ အတိုက်အခံက ယုံလျှင်လည်း အစိုးရက မယုံ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရလျှင် အမှန်တကယ် ဘက်မလိုက်သည့် တတိယပါတီ ဆိုသည်မျိုး သိပ်မရှိ။ ရှိလျှင်လည်း ကြားညပ်ဖို့ များသည်။ အချုပ်ဆိုရလျှင် ‘စံနှုန်း’ တွေကို အသေမကိုင်ဘဲ လက်တွေ့ကျကျ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ကြဖို့ပင် ဖြစ်ပါသည်။
Trimming အရေးကြီး လက်ရှိအစိုးရ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်နေသည့် ‘သုံးပွင့်ဆိုင် အပြောင်းအလဲ’ (နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၊ စီးပွားရေး ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်) တွင် စာရေးသူ မျှော်လင့်ချက် အထားဆုံးမှာ ငြိမ်းချမ်းရေး ကြိုးပမ်းမှု ဖြစ်စဉ်ပင် ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စ အောင်မြင်မှုရလျှင် တိုင်းပြည်၏ အရေးအကြီးဆုံး အခြေခံ ပဋိပက္ခကြီးကို ဖြေရှင်းနိုင်ပြီ ဖြစ်၍ ဒီမိုကရေစီ အပြောင်းအလဲ ပိုမိုချောမွေ့ အဆင်ပြေလိမ့်မည်ဟု နားလည်ထားသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေး ကြိုးပမ်းမှု ၂ နှစ်ဝန်းကျင် ကာလအတွင်း သဘောကွဲလွဲချက် ၁၃၀ ရှိရာမှ ၁၀၀ နောက် ၃၀ နောက်ဆုံး ၅ ချက်သာ ကျန်တော့သည်ဟု သိရ၍ အားတက်မိသည်။ သို့တစေ ယခု ချိန်ထိ နောက်ဆုံး ဆွေးနွေးပွဲတွင်ကား ဘာတစ်ခုမှ သဘောတူညီမှုမရဘဲ ရပ်နားလိုက်ရသည်။ ‘ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်းဝေး’ ရတော့မည် လော။ ‘ဘာကြောင့်၊ ဘယ်လို’ ဆိုသည့် သတင်းတွေကိုကား ဘက်စုံထောင့်စုံမှ ရသလောက် ရနေပါသည်။ သို့တိုင်အောင် ဘာတစ်ခုမှ အတည်ပြုလို့ မရ။ တရားဝင် သတင်းဇာစ်မြစ်တို့၌ နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာနှင့် ဂျာနယ်တွေသာ ရှိသည်။ ခက်နေသည်မှာ အစိုးရသတင်းစာက ဤကိစ္စများကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မဖော်ပြ။ ပုဂ္ဂလိက မီဒီယာများကျပြန်တော့ ‘ဘယ်ဟာက သတင်းအသား၊ ဘယ်ဟာက ထင်မြင်ချက်’ ဆိုသည်ကို မနည်းခွဲယူနေရသည်။ ၂၁ အောက်တိုဘာ အင်္ဂါနေ့ထုတ် ‘ပြည်သူ့အရေးဂျာနယ်’ တွင် ပါသော NCCT အဖွဲ့ဝင် ချင်းအမျိုးသား တပ်ဦး၏ အဓိပတိ ကောင်စီဝင် ဆလိုင်းလျန်မှုန်းဆာခေါင်၏ စကားတွေကို ဖတ်ရတော့မှ ကန့်လန့်ကာ နောက်ကွယ်မှ အယူကွဲ၊ မူကွဲအချို့ကို အထိုက်အလျောက် ဆဝါးလို့ ရသည်။ သူ့စကားက ယခုလို . . .။ “ငြိမ်းချမ်းရေးက အနှစ် ၆၀ ပြည်တွင်း စစ်ရပ်စဲရေး၊ အင်မတန်မှ အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စဖြစ်တယ်။ အဲဒါကို ဘယ်အဖွဲ့၊ ဘယ်ပါတီကို သဘောကျလို့၊ သဘောမကျလို့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို အချိန်ဆွဲတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆ ရှိတဲ့သူက ဘယ်သူပဲရှိရှိ၊ အစိုးရ ဘက်မှာပဲရှိရှိ၊ ကျွန်တော်တို့ ဘက်မှာပဲရှိရှိ ရှိခဲ့သည်ရှိသော် မှားတယ်လို့ ကျွန်တော် မြင်တယ်။ . . . .၊ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ နောက်မှလုပ်မယ်၊ အဲဒီအစိုးရတက်မှ လုပ်မယ်၊ ဒါမှမဟုတ် အခုမလုပ်သေးဘူး၊ လုပ်မယ်ဆိုပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးကို နိုင်ငံရေးအတွက် အလောင်းစား လုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့ ချဉ်းကပ်ရင် ဘယ်သူပဲ ဖြစ်ဖြစ်မှားတယ်လို့ ကျွန်တော် မြင်တယ်”
ကောက်နုတ်ချက် (ပြည်သူ့အရေးဂျာနယ်၊ အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၅) ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်ကာလမှာ နီးသထက်နီးလာပြီ ဖြစ်ရာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ ပို၍ပို၍ ထိပ်တိုက်သဘော ဆောင်လာသည် ဖြစ်၍ သူ့စကားကို အလေးထား စဉ်းစားကြဖို့ လိုမည်ထင်ပါသည်။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကို အများကြီး မျှော်လင့်ထားကြသည့် အင်အားစုများ အနေနှင့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှုများကို ယခုလောလောဆယ်ထက် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအလွန် ပိုမို ဒီမိုကရက်တစ်ကျသော အစိုးရ လက်ထက်တွင် စတင်ပါက ပိုအခွင့်သာလေမလား စဉ်းစားကောင်း စဉ်းစားကြပါလိမ့်မည်။ စာရေးသူ၏ အမြင်ကို ဆိုရလျှင် ငြိမ်းချမ်းရေး ကိစ္စတွင် အဆုံးအဖြတ် အခန်းရှိနေသည်မှာ နိုင်ငံရေး ပါတီများမဟုတ်။ တပ်မတော်သာ ဖြစ်သည်။ တပ်မတော်နှင့် အဆင်ပြေသော အစိုးရ လက်ထက်မှာဆိုလျှင် တပ်မတော်ကို ဖျောင်းဖျနားချနိုင်စရာ ရှိနိုင်သည်။ အဆင်မပြေ၊ ထိပ်တိုက် ဖြစ်မည့် အစိုးရ လက်ထက်ဆိုလျှင် ဤပဋိပက္ခ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ များအပေါ် ဆိုးကျိုး သက်ရောက်နိုင်စရာ ရှိလိမ့်မည် ထင်သည်။ နိုင်ငံရေးတွင် ‘အချိန်ရွေးချယ်မှု’ (Timming) ကလည်း အရေးကြီးသည်။
ဤသို့ဆိုလျှင် ဘာလုပ်ကြမည်နည်း။ အထက်ဖော်ပြပါ ဆလိုင်းလျန်မှုန်းဆာခေါင်၏ စကားတစ်နေရာတွင် အဖြေပါပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ယခုလို . . . ‘ဒုက္ခခံနေကြရတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ဘဝတွေကို ငြိမ်းချမ်းအောင် ကျွန်တော်တို့ လုပ်ဖို့က တစ်နာရီစောရင် တစ်နာရီ ပိုအကျိုးရှိတယ်။ တစ်နေ့စောရင် တစ်နေ့ပိုအကျိုးရှိတယ်’ စသည်ဖြင့် . . .။
လူ့အဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ်တွင် အခြေခံ ပဋိပက္ခများကို ဖြေရှင်းနိုင်လောက်သည့် ‘နိုင်ငံရေး ပဋိညာဉ်’ (Political Pact) တစ်ရပ် မရှိလျှင် ရွေးကောက်ပွဲများကို အများကြီး မျှော်လင့်လို့ ရနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ရွေးကောက်ပွဲအနေနှင့် ‘ပဋိပက္ခ ဖြေရှင်းရေး’ (Conflict Resolution) အထိမရောက်နိုင်၊ လွန်ရောကျွံရော ‘ပဋိပက္ခ စီမံခန့်ခွဲရေး’ (Conflict Management) လောက်သာ ဖြစ်နိုင်စရာ ရှိပါသည်။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင် အခြေခံအကျဆုံး ပဋိပက္ခဟု ဆိုနိုင်လောက်သည့် ပြည်တွင်းစစ် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မှသာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးလို အရေးကြီးသည့် ကိစ္စရပ်များအတွက် လမ်းပွင့်လာနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ရွေးကောက်ပွဲ များသည်လည်း ပို၍ထူးခြားသည့် အဓိပ္ပာယ် ဆောင်လာနိုင်ပါသည်။ (ဥပမာအနေနှင့် မကြာခင်က ထွက်ပေါ်လာသော ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်နိုင်ရေး အကောင်အထည်ဖော်မှု ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာပါ တပ်မတော်သား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ပုဒ်မအချို့နှင့် ပတ်သက်သော အကြံပြုချက်တွင် ‘ဖက်ဒရယ်နှင့် ပတ်သက်၍ အဓိပ္ပာယ် အမျိုးမျိုး ဖွင့်ဆိုနိုင်ပြီး လိုအပ်သလို ဆွဲယူဆောင်ရွက်နိုင်သဖြင့် မူလအတိုင်း ထားရှိရန်’ ဟု တင်ပြထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ အကယ်၍သာ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှုများမှ ဖက်ဒရယ် ဖွင့်ဆိုချက်ကို အများညီရယူနိုင်လျှင် တပ်မတော်၏ စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်မှုကို ဖြေရှင်းမပေးနိုင်ပါသလော စဉ်းစားဖို့ လိုမည်ထင်သည်။)
သို့အတွက် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲများ၏ ပထမခြေလှမ်း၊ တစ်ပြည်လုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးကို အမြန်ဆုံး လက်မှတ် ရေးထိုးနိုင်ဖို့ အရေးတကြီး လိုအပ်နေပြီဟု ယူဆရပါသည်။ နောက်ထပ် အချိန်မဆိုင်းသင့်တော့ဟု သဘောရသည်။ ပထမအဆင့် သဘောတူသည့် အင်အားစုများနှင့် လက်မှတ်ထိုးပြီး နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှုများ စစေချင်သည်။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် လက်မှတ် မထိုးလိုသေးသော အင်အားစုများ အတွက်လည်း လမ်းဖွင့်ပေးထား ရပါလိမ့်မည်။ သူတို့တတွေကို နိုင်ငံရေးဆွေး နွေးပွဲများတွင် လေ့လာသူအဖြစ် တက်ခွင့်ပေးပြီး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး အတွက်လည်း ဆက်လက် ဆွေးနွေးသင့်ပါသည်။ အရေးကြီးသည်မှာ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ တတ်နိုင်သလောက် သေနတ်သံပျောက်ပြီး နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲများ စတင်နိုင်ဖို့ ဖြစ်သည်။ အစစ်အမှန် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆန္ဒကို ကြွေးကြော်သံများ၊ မိန့်ခွန်းများ၊ ကြေညာချက်များနှင့် သာမက လက်တွေ့ကျကျ ပြသနိုင်ဖို့ သက်ဆိုင်ရာ အင်အားစုအားလုံးသို့ မေတ္တာရပ်ခံ ပန်ကြားအပ်ပါသည်။
ကျော်ဝင်း ၂၅၊ အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၁၄	« မြန်မာ့ငါးလုပ်ငန်းရှင်များ ဝင်ငွေတိုးစေဖို့	ဝန်ထုပ်တွေ သီတစ်တန်းရယ်နဲ့ ဒီလမ်းဘယ်မှာတွင်တော့မယ် »